Xasan Shiikh oo u dhoofey Sudan
1 Jan 1, 2013 - 5:35:35 AM
Madaxweynaha Somalia Xasan Sh. Maxamuud iyo Wadfi uu hogaaminayo ayaa u dhoofay dalka Sudan halkaasoo ay kaga qaybgalayaan Munaasabad loo sameynayo sanadguuradii 57-aad ee kasoo wareegtay Markii dalkaas uu ka xoroobay Ingiriiska.
Safarka Madaxweynaha ayaa wuxuu qayb ka noqonayaa safarro dhowr oo uu ku tagay dalal ku yaala Bariga Afrika, iyadoo marka uu dhameysto ka qaybgalka munaasabada lagu wado inuu kulamo la yeesho dhigiisa dalka Suudaan Cumar Xasan Al-Bashiir.
Wafdiga Madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ah Wasiiro iyo Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Somalia, waxaana wafdigu ay ka degeen Gobolka Blue Nile halkaas oo looga soo galbiyay dhinaca Caasimada Sudan ee Khartuum.
Madaxweynaha Somali ayaan la hadlin saxaafada markii uu ka dhoofayay Muqdisho iyadoo ay noqonayso markii koowaad oo uu dalka Sudan ku tago booqasho rasmi ah, isagoo horay u sheegay inuu booqan doono dalalka Bariga Afrika.
Dalka Sudan ayaa waxaa horay uu u sameeyay lacago Shilin Somal ah oo la sheegay in lagu bedeli doono lacagta hada la isticmaalo, iyadoo aan la ogeyn in Xasan Shiikh uu kala hadli doono dhigiisa Sudan lacagtaas iyo in kale.
Sidoo kale dalka Sudan waxaa ku sugan arday fara badan oo wax ka barta lamana sheegin inuu la kulmi doono iyo in kale, kalena lama oga safarkiisa inta maalmood ee uu qaadan doono.
Xasan Sh. Maxamuud ayaa horay u booqday dalal ku yaala Bariga Afirka iyo dalka Turkiga oo xiriir dhow la leh Somalia, waxaana dalalka uu horay u booqday ka mid ah, Ethiopia, Djibouti, Uganda iyo Kenya oo dhamaantood ay ciidamo ka joogaan Somalia.